Adeegga Ku Dhufashada Birta - Anebon Birta Products Co., Ltd.
Adeegga Nooca Degdega ah
Adeegga Shaabinta Birta
Adeegga shubay Die
Qaybaha Wareegga CNC
Qaybo ka mid ah Milling CNC
Shaabadda birta ah ee loo yaqaan 'Anebon stamping stamp' waxaa ka mid ah feer, foorarsiga, fidinta, samaynta iyo hawlo kale. Nidaam kasta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo qalab loogu talagalay CAD / CAM oo bixin kara saxnaanta loo baahan yahay ee qaybaha adag. Shaabad birta xaashidu waa hab dhakhso leh oo wax ku ool ah oo lagu soo saaro qaybo waara, tayo sarena u leh qalabka, aerospace, caafimaadka, elektarooniga, warshadaha, nalalka iyo warshadaha kale. Waxaan u adeegsan doonnaa qalabkeenna horumarsan iyo koox khibrad leh si aan u qaabeyno wax soo saarka aad u maleyneyso, waxaanan aaminsanahay inaan dabooli karno baahiyahaaga xagga qiimaha iyo tayada labadaba.
Waxaan bixin karnaa xulashooyinka soo-saarka soo socda:
Qaybaha qotada dheer
Qaybaha is urursaday
Qodista, taabashada iyo dib u habaynta
Barxad iyo alxanka saadaasha
Alxanka CO2 - Buug gacmeed iyo robot
Habka Shaabinta Birta
In kasta oo wax laga beddeli karo si loo soo saaro qaybo gaar ah, shaambadeena birta badanaa waxay raacdaa isla shan tallaabo:
Dib u eegista Naqshadeynta:Injineeradayadu waxay si faahfaahsan dib ugu eegi doonaan naqshadeynta qaybta si ay u hubiyaan inay ku habboon tahay shaabadda birta. Tan waxaa ka mid ah falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan cabbirka qeybta, qalabka, saamiga fidsan iyo dulqaadka loo baahan yahay.
Xulista Saxaafadda: Injineeradayadu waxay go'aamin doonaan cabirka mashiinka ugu habboon iyo dhexroorka cabbirka iyo maaddada.
3D Nooc Virtual:isticmaal softiweer kumbuyuutareed si aad u abuurto noocyo qaybo ah. Kahor hawsha wax soo saarku intayna bilaaban, noocyadu waxay marayaan tiro badan oo jilitaanno hawlgal ah si loo helo wax dhibaato ah oo xagga naqshadeynta ah.
Qalabaynta Qalabka: Injineeradeenna xirfadda leh waxay hubiyaan cabbirka iyo shuruudaha qaybaha waxayna dejiyaan qalab.
Geedi socodka:Ku dheji biraha ama birta maran madhan caaryada oo hagaaji. Kadib dhaqaaji mashiinka saxaafadda oo bilow inaad la shaqeyso xoog la toli karo. Ku soo celi hawsha illaa inta ay ka gaadhayso cabbirka iyo qaabka la doonayo.
Naqshadaynta iyo soo saarista qalabka horumarka iyo saxda ayaa qayb ka ah ballanqaadka lagu bixinayo xal dhammaystiran oo wax soo saar ah oo loogu talagalay soo saarista qaybaha biraha la cadaadiyey.
Maanta, waxaan u adeegsannaa qibradeena gudaha si aan u bixino adeegyo qaali ah oo qiimo-ku-ool ah.
Waxaan dib u laaban karnaa naqshadeynta sheyga ama sawirka injineernimada CAD si aan u soo saarno qalab mashiin soo saari kara badeecadaada. Qalabka caaryada waa kuwo aad u adag oo lagu kalsoonaan karo, oo leh wareeg nololeed oo dhaadheer, sidaa darteed kharashka waxaa loo qaadan karaa maalgashi.
Qalabka caaryada adiga ayaa iska leh, laakiin waan dayactiri karnaa, dayactiri karnaa isla markaana dayactiri karnaa markii loo baahdo.
Sida qalab dhameystiran iyo dukaanka dhinta, waxaan xirfad ku leenahay dhammaan meelaha been abuurka ah oo ay ka mid yihiin leysarka fiber, feerka CNC, foorarsiga CNC, sameynta CNC, alxanka, mashiinada CNC, qalabka gelinta iyo isku imaatinka.
Waxaan aqbalnaa alaabta ceyriinka ah ee ku jirta go'yaasha, taarikada, baararka ama tuubooyinka waxaana qibrad u leenahay la shaqeynta waxyaabo kala duwan sida aluminium, naxaas, bir bir ah iyo birta kaarboon. Adeegyada kale waxaa ka mid ah galinta qalabka, alxamida, shiidi, mashiinka, leexinta iyo isku imaatinka. Maaddaama mugyadaadu ay kordhayaan waxaan sidoo kale haysannaa ikhtiyaar ah in qalab aad u adag lagu kiciyo qaybahaaga si aad ugu dhex shaqeyso waaxdayada ku dhufashada birta. Fursadaha kormeerka waxay u dhexeeyaan hubinta muuqaalka fudud illaa habka loo maro FAIR & PPAP.
Su'aalaha ku saabsan wax soo saarkayaga, fadlan noo dhaaf e-maylkaaga waxaanan la soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
Waxyaabaha Anebon biraha Co., LTD